I benefici della devozione alle anime del Purgatorio | PREGHIERA&NEWS
Uru nke itinye mkpụrụ obi na Purgatory
Paolo Tescione	Edere ya November 8, 2020 November 8, 2020
Bilie ọmịiko anyị. Mgbe ị chere n’obere mmehie ọ bụla ga-ata ahụhụ n’ọkụ, ọ bụ na ị naghị enwe mkpali iji zere mmehie niile, oyi, nleghara anya? Mgbe anyị chere na ezi ọrụ ọ bụla, ihe ọ bụla Indulgence bụ ụzọ isi zere ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke Purgatory, ọ bụ na anyị anaghị enwe obi ụtọ banyere ha? Nwere ike anyị ikpe ekpere n'ili nke nna, nke onye a hụrụ n'anya, na-ekpe ekpere oyi? Lee ihe mkpali nke ọmịiko anyị!
Ọ na-eduru anyị gaa Eluigwe. Purgatory bụ oghere nke Paradaịs; mkpụrụ obi niile nọ na pọgatrị dị nsọ, n’oge na-adịghị anya, ha ga-efekwa n’eluigwe; a na-enye anyị ikike ịtụ anya ebube ha. Nraranye nke Purgatory na-echetara anyị ebum n’obi anyị ikpe-azụ; ihe isi ike nke iru ebe ahu; ọ na-agwa anyị na ọrụ dị nsọ dị mkpa karịa ọlaedo na ihe efu niile dị n’ụwa; ọ na-egosi anyị ebe anyị ga-ahụ ndị anyị hụrụ n'anya ... Lee ọtụtụ ihe kasi anyị obi!
Anyị na-amụba ndị intercessors. Mkpụrụ obi, nwere onwe ya pụọ ​​na Purgatory maka ekpere anyị, ruru Eluigwe, agaghị echefu anyị. Ọbụnadị otu awa nke ichere maka ebube nke eluigwe bụ nnukwu ihe ọma nke na ọ gaghị ekwe omume ịghara inwe obi ekele n'ebe anyị nọ. Site kwa nelu ebe ahu ole onyinye ha agaghi enweta anyi! Jizọs n'onwe ya bụ onye nwere ike inye ndị nwunye ya ụgwọ ga-emecha kelee gị; na Meri, Onye Nche nke Mmụọ nke mkpụrụ obi, n’ezie Ndị-nsọ nile, ndị nabatara otu n’ime ndị otu ha n’oge na-adịghị anya, ha agaghị ekpe ekpere maka ndị gbapụtara ya? You chere maka ọtụtụ elele?
OMUME. - Gụọnụ De profundis maka mkpụrụ obi kachasị mkpa nke Jizọs na Meri.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa na ndị ndụ gị na Chineke chọrọ ka ị hụ n'anya
Next Post → Post ozo:Etu ị ga-esi nyere Onye Kraịst tọrọ atọ mmehie